मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानले एमाले मधेसविरोधी हो भन्ने भ्रम चिर्छ —वैजनाथ चौधरी थारु ,सांसद, नेकपा (एमाले) – Maitri News
मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानले एमाले मधेसविरोधी हो भन्ने भ्रम चिर्छ —वैजनाथ चौधरी थारु ,सांसद, नेकपा (एमाले)
मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानले एमाले मधेसविरोधी हो भन्ने भ्रम चिर्छ —वैजनाथ चौधरी थारु ,सासंद, नेकपा (एमाले)
वैजनाथ चौधरी एमालेका सांसद् हुनुहुन्छ । उहाँ मधेसी मोर्चाका नेताहरुले लिएको अडानको तिव्र विरोधी हुनुहन्छ । उहाँ उनीहरुका माग राष्ट्रहितमा नभएको जिकिर पनि गर्नुहुन्छ । थारुसँग एमालेले सुरु गरेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान, यसले मधेसमा पार्ने प्रभाव, एमालेको आगामी योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित भएर मैत्रीन्युज डटकमले गरेको कुराकानीः
नेकपा (एमाले) फागुन २१ बाट सुरु गरेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ ?
अहिले सबैभन्दा बढी तराई विरोधी, आदिवासी–जनजाति विरोधी, थारु विरोधी भनेर एमालेलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । तराईँमै जन्मी–हुर्की गरेको पार्टी एमालेलाई यस्तो आरोप लाग्नु निश्चय पनि राम्रो कुरा होइन । त्यसैले मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानको सबै भन्दा पहिलो उद्देश्य यो भ्रम चिर्नका लागि हो । दोस्रो भनेको एमाले राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम गर्ने, राष्ट्रिय अखण्डता कायम गर्ने हो । अहिले सबै भन्दा ‘हट केक’ प्रदेश नम्बर पाँच बनेको छ । संविधान संशोधन मार्फत प्रदेश नम्बर पाँचलाई विभाजन गर्ने कुरा आएको छ । यहाँका जनता प्रदेश नम्बर पाँच अलग गर्ने पक्षमा छैनन् । म यही प्रदेश नम्बर पाँच त्यसमा पनि तराईका जनताको भोट प्राप्त गरेर सभासद् र सांसद् बनेको व्यक्ति हुँ । यो अभियान यसमा पनि लक्षित छ । तराई र पहाडका जनता मिलेर बस्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि यो अभियान केन्द्रित भएको छ ।
एमालेलेले तराई–मधेस केन्द्रित मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिरहेका बेला तराई–मधेस
केन्द्रित दलले नै एमालेलाई तराई–मधेस प्रवेश गर्न नदिने धम्की दिइरहेका छन् । यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?
तराई–मधेसमा जनताबाट बहिष्किृत भएका, तराइका जनताबाट तिरस्कृत भएकाहरुले लगाएको यो धम्कीको कुनै अर्थ छैन । तराईका जनताबाट वहिष्कृत भएकाहरुले यो कुराको हेक्का राखेका छन् भन्ने मैले ठानेको छु । एमाले हिमाल, पहाड तराईको पार्टी हो । १९ वटा दल मिलेर तराईबाट जम्माजम्मी १२ सिट ल्याएकाहरुले एमालेलाई ध्वाँस दिनुको कुनै तुक छैन । एमाले तराईमा जन्मि–हुर्की गरेको, तराईका जनताको मन–मनमा बसेको पार्टीको हो । यस्तो पार्टीलाई तराई–मधेसमा पस्न नदिने को–हो ? निर्वाचनमा हजार मत नकटाउने मधेसी दलहरुले ११ हजार मत ल्याएको मलाई लौ कसरी पस्न दिदैनन् हेरौँ । मेरो क्षेत्रमा मात्र होइन, तराईमै एमालेलाई पस्न नदिने कसैको पनि सामर्थ छैन । हो, हामी तराईमा बलियो छौँ भनेर कसैलाई जिस्क्याँदै पनि जादैनौँ । त्यसैले अरुले पनि एमालेलाई नजिस्क्याएकै राम्रो हुन्छ । यो हिमाली, पहाडी र मधेसीलाई जोड्ने अभियान हो । यो अभियानलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैनन् ।
एमालेको यो अभियान निर्वाचन केन्द्रित अभियान हो भन्ने पनि छ नि ?
हामीले संविधान निर्माण गर्दा नै एक वर्ष भित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेका थियौँ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला हामीले निर्वाचन तालिका समेत सार्वजनिक गरेका थियौँ । तर, विभिन्न बाहनामा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्ने काम भयो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर, उहाँका पालामा निर्वाचन सम्वन्धि कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेनन् । लामो समयको अन्योलपछि अप्रचण्ड सरकारले निर्वाचन गर्ने कुरा गरेको छ । यसको एमालेले पनि स्वागत गरेको छ । अहिले पनि निर्वाचन हुने हो कि होइन भन्ने अन्योल जारी नै छ । एमाले ०७४ माघ ७ भित्रमा तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्छ भन्नेमा छ । अहिलेको अभियान संविधान कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नका लागि पनि हो ।
तपाईँका पार्टी अध्यक्षले पटक–पटक एमाले आगामी निर्वाचनमा बहुमतसहितको पहिलो पार्टी बन्छ भन्दै आउनु भएको छ । यो सम्भव छ ?
व्यवस्थापिका संसद्मा हेर्ने हो भने एमाले दोस्रो पार्टी हो । तर,राष्ट्र निर्माण गर्ने, जातिय एकता कायम गर्ने, शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने, सम्वृद्धिको सपना कोर्ने सन्दर्भमा एमाले अहिले पनि पहिलो पार्टी नै हो । नेपाललाई लीड गर्ने पार्टी पनि एमाले नै हो । अहिले आम जनताले पनि एक पटक एमालेलाई बहुमतसहितको पहिलो पार्टी बनाउन चाहेका छन् । आगामी निर्वाचनमा आम जनताको त्यो चाहना पूरा हुँदैछ । एमाले त्यही तयारीका साथ अभियानमा जुटेको छ ।
एमालेप्रति आशावादी हुने आधार के–छ ?
अहिलेको अभियानमा सबै भन्दा बढी सक्रिय मधेसी मूलकै साथीहरु हुनुहुन्छ । अभियानको तयारी पनि मधेसमै केन्द्रित छ । हामीले पहाडतिर पनि जनताका घर–दैलोमा गएर एमालेको प्रष्ट अडानका बारेमा जानकारी गराएका छौँ । यो अभियानले तराई–मधेका केही जनतामा रहेको भ्रम चिरिने छ । हाम्रो परिचालन, एमालेले बोकेको एजेण्ड, राष्ट्रियाका सन्दर्भमा राखेको एमालेको धारणा सबै कुराले एमाले आगामी निर्वाचनमा बहुमतसहित पहिलो हुने निश्चित छ ।
तर, अहिले संविधान नै कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने पनि आशंका छ नि ?
मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु । यो संविधान संशोधनको एजेण्डा विना मौसमको वाजा हो । हामीले तीन चरणका निर्वाचन ०७४ माघ ७ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । अहिलेको हाम्रो आवश्यकता पनि त्यही हो । त्यो सम्पन्न भयो भने मात्र हामीले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सक्छौँ । त्यसैले अहिले सरकारले गर्नुपर्ने भनेको निर्वाचनको तयारी हो । तर, अहिले सरकारले त्यसो गरिरहेको छैन । बरु उसले संविधान संशोधनको विषय उठाएर वेमौसमको बाजा बजाइरहेको छ । अहिलेको सरकार गर्नु पर्ने कामतिर भन्दा पनि गर्नु नहुने कामतिर बढी आकर्षित भएको छ । यो सकारात्मक कुरा होइन । सीमांनकै कुरा गर्ने हो भने पनि झापा, मोरङ, सुनसरी र कैलाली कञ्चनपुरको हो । प्रदेश नम्बर पाँचमा कुनै पनि त्यस्तो विवाद छैन । तर, सरकारले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि प्रदेश नम्बर पाँचको विवाद झिकेको छ । यो अभियानका क्रममा यो भ्रम पनि हामीले चिर्ने छौँ । हामीले अहिले पनि प्रष्ट रुपमा भन्दै आएका छौँ । संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सबै मिलेर अघि बढ्न सक्छौँ । सरकारले त्यो ख्याल नगर्ने हो भने देश मुठभेडतिर जान्छ । यसले नेपाली जनतालाई त हानी गर्छ नै सबै भन्दा बढी हानी माओवादी र कांग्रेसलाई हुन्छ ।
अभियानका क्रममा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटको विषयमा पनि मधेसी जनतालाई बुझाउनु हुन्छ होला नि ?
एमाले नेतृत्वको सरकारले फाष्टट्रयाक निजगढ काठमाडौँ १० अर्व, हुलाकी राजमार्ग ४ अर्व २० करोड, सुनकोशी कमला डाइभर्सन ५ अर्र्व ३५ करोड, लुम्बिनी बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न ७ अर्व २२ करोड छुट्याएको थियो ।
त्यतिमात्र होइन, निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १ अर्व ५० करोड, वोर्डर एरिया सडकका लागि २ अर्व वर्दिवास सिमरा रेलवे, १८ जिल्लाको सदरमुकाम विकासका लागि ५०–५० करोड, गाउँ विकासका लागि १ अर्व ८८ करोड, राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि १ अर्व ८८ करोड, प्रधानमन्त्री कृषि प्रोजेक्टमा ५ अर्व ७५ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
त्यसैगरी १ सय वटा डीप वोरिङ, विद्यूत उत्पादन प्रसारण लाइन, भेरी–ववई डाइभर्सन, हुलाकी सडक आदिमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसरी तराईलाई नै केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गर्ने एमाले तराई विरोधी भन्नेहरुलाई यो अभियानले गतिलो जवाफ दिने छ ।